စွမ်းရည်:10~ ၁၅ တန် / ဇ
အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်:ကျွဲနွား, ဝက်, ဆိတ်သငယ်,နွားမ, သိုး, ယုန်, ကြက်သား, ဘဲ, ငါး, စသည်တို့
အကြီးစားအစာတောင့်ကြိတ်စက်ကိုပြောင်းဖူးစေ့အတွက်အသုံးပြုသည် ,ဂျုံ,ပြောင်း,ပန်းပွင့်, ချိုသောအာလူးဝိုင်, Clover မြက်, ကောက်ရိုးကိုမုဒိမ်းကျင့်သည်, စသည်တို့. ကျွဲနွားများအတွက်အစာကျွေးခြင်းသို့, ဝက်, ဆိတ်သငယ်,နွားမ, သိုး, ယုန်, ကြက်သား, ဘဲ, ငါး, စသည်တို့. စက်မှုအစာတောင့်စက်သည်အလယ်အလတ်စားအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့်မွေးမြူရေးခြံများတွင်အစာကျွေးရန် ဦး စားပေးကိရိယာဖြစ်သည်. ဤလက်စွပ်သည်အစာကျွေးသောကြိတ်စက်သည်တိရိစ္ဆာန်အစာအတွက်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုအတောင့်တင်းစေနိုင်သည်, ရေနေအစာကျွေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ, မြက်မှုန့်နှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာပစ္စည်းများ။ စက်၏အကျယ်မှာ ၁.၅ မီလီမီတာမှ ၂၀ မီလီမီတာအထိကျယ်ဝန်းသည်။, အစာတောင့်ကြိတ်သည်မတူညီသောပစ္စည်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်သင့်လျော်သည်.
1.ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်လွယ်ကူပါစေ. mash အစာကျွေးခြင်းနှင့်မြက်မုန့်ညက်များသည်အရည်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလိုအပ်ပါ. ထို့ကြောင့်, pelleted feed ကို၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုအစောပိုင်းကအချိန်အတွက်အတော်လေးညီမျှသည်.
3.ကောင်းပြီအစာကြေ. အစာကျွေးခြင်းရဲ့မြင့်မားတဲ့ solidity ရေဒီယိုနှင့်အတူ, ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည် , အစာအာဟာရသည်တိရစ္ဆာန်များအားကောင်းစွာအစာကြေနိုင်ပြီးစုပ်ယူသည်.
4.ရောဂါနှင့်ကပ်ပါးကောင်ကာကွယ်တားဆီး. အချိုမှုန့်သည် pelleting ဖြစ်စဉ်တွင်ပဲနှင့် frumentum ရှိ trypsin ခုခံအားအချက်များအပေါ်သက်ရောက်သည်, အစာခြေသက်သာခြင်းနှင့်အစာခြေရောဂါများကိုကပ်ပါးစေတီကောင်ကြက်ဥနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဇီဝသက်ရှိများကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်.
6.ဖြစ်စဉ်များအတွက်အပူပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်သည်, အဆိုပါလုံးလေးများ '' တောက်ပ better.The အပူလုံးလေးများအတွက်ပေါ့ပေါ့မြက်အမွှေးအကြိုင်ကိုထည့်လေ့မရှိထွက်လှည့်, သည်အခြားအစာကျွေးခြင်းဖြစ်စဉ်များမကျင့်နေစဉ်.
အကြီးစားအစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်အစာကျွေးသောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည် (ဝက်အူလမ်း), အေးဆေး,စာနယ်ဇင်းအခန်းထဲကဂီယာစနစ်, Overload ကာကွယ်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်. ring die type အစာကြိတ်ကိုကျွေးမွေးသည့်အနေဖြင့် pelleting chamber ထဲသို့အတင်းဖိအားပေးပြီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary scrapers ဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်. ဒါဟာရွှေ့ပြောင်းနှင့်အတူ featured ဖြစ်ပါတယ်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်မြင့်မားသော output ကို. အဆိုပါ output ကိုစွမ်းရည် 10 ~ 15t / h ကနေနေကြပါတယ်
1.ကောင်းသောအဆင့်အတန်းကိုအာမခံရန်ပထမ ဦး ဆုံးအတွေ့အကြုံမတိုင်မီညာဘက်အထည်ကိုဝတ်ဆင်လိုအပ်ပါသည်.
2.စက်ထဲသို့သင့်လက်ကိုတင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပါ. လိုအပ်ခဲ့လျှင်, တင်ကူညီရန်တုတ်ကိုသုံးပါ.
3.စက်မစတင်ခင်အမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပါ. စက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်အချို့ကိုချန်ထားပါ. အကယ်၍ compression roller သည်တင်းပလိပ်နှင့်အချည်းနှီးဖြစ်သွားသည် .
5.compression roller ကို bolt အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အချိန်တိုင်းချိန်ညှိပေးရမည်.
ကြီးမားသောအစာစားတောင့်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
(t / h) 1~ ၁.၅ 1.5~ ၂.၅ 2~43~66~ 10
(မီလီမီတာ) 250 300 320 350 420